Warshadda deriska qaboojinta eeyga Shiinaha iyo soosaarayaasha | Huanyi
Gel polymer qaboojiyaha wuxuu la mid yahay gel polymer-ka qaboojiyaha koollada loogu talagalay dhallaanka. Polymer-ka leh biyo aad u sarreeya wuxuu si hufan uga soo nuugaa kuleylka jirka bini'aadamka ilaa sariirta wuxuuna ku tiirsan yahay ku xirnaanta iyo faafidda gel polymer si loo kululeeyo si loo sameeyo wanaag kuleylka isweydaarsiga iyo wareejinta habka udhaxeeya kuleylka jirka bini'aadamka iyo dhaxanta jilicsan iyo sidoo kale inta u dhaxeysa derbiga jiilaalka iyo hawada.
L w Dhumucdiisuna Miisaanka
Magaca Product: Digaag qaboojiye eey is-qaboojiye aan biyuhu lahayn oo derin qaboojiyaha ah
Waxyaabaha: baxay wax: Nylon + PVC + Foornada xumbo; waxyaabaha gudaha ah: CMC + Isbuunyada xumbo + Biyaha la sifeeyey.
Miisaanka: 1700g, La habeeyay
Cabir: 50 * 60cm, La habeeyay
Calaamadda: Loo habeeyay
Midabka: Buluug buluug ah, La habeeyay
Feature: Dib loo isticmaali karo; bey'ad-saaxiibtinimo leh; Aan sun ahayn, Aan-caasin ahayn.
Waqtiga tijaabada sahayda: 7 maalmood ama wixii ka dambeeya amarka waa la xaqiijin karaa; muunadda alaabada alaabada ayaa la bixin karaa 1-3 maalmood kadib.
Habka qiimaha: Ex Works, FOB, CIF, CRR, CIP, DDP, DDU.
Muddada lacag bixinta: 30% hormaris ah kahor; 70% bixinta kahor bixinta ama soo bandhigida nuqul B / LT / T, Paypal
Xaqiijin: SGS, CE, FDA, GAAR, ISO9001, BSCI
1. Ma waxaad tahay warshad ama shirkad keliya?
Waxaan leenahay warshad soo saarta derin qaboojiyaha eeyga ilaa 10 sano. Tayada iyo adeegga ugu fiican ayaa mudan kalsoonidaada.
2. Maxaan kuu dooran karnaa?
(1). Lagu kalsoonaan karo --- waxaan nahay shirkadda dhabta ah, waxaan u huraynaa guul-guul
(2). Xirfad leh --- waxaan ku siinaa alaabta xayawaanka sida saxda ah ee aad rabto
(3). Warshad --- waxaan leenahay warshad, sidaa darteed qiime macquul ah iyo gaarsiin dhakhso leh
(4). Muunado --- Adeegyadeena waxaa ka go'an inaan ku soo qaadno muunad 24 saacadood gudahood ah, waxaanan bixin karnaa muunad bilaash ah
3. Sidee ku saabsan kharashka dhoofinta?
Haddii alaabtaadu aysan badneyn, waxaan kuu soo diri karnaa alaab soo diraha sida FEDEX, DHL, muddo dheer ayaan la shaqeynay, marka qiime fiican ayaan haysannaa. Haddii alaabtaadu ballaaran tahay, waxaan kuu soo diri doonnaa badda. qiimaha waan kuu soo qaadan karnaa, markaa waad dooran kartaa inaad isticmaasho gudbiyahayaga ama kanaga.
4. Ka waran qiimaha? Ma ka dhigi kartaa mid ka jaban?
Qiimuhu wuxuu kuxiranyahay sheyga dalabkaaga (Qaab, cabir, tiro)
Garaac oraahda ka dib markaad hesho sharraxaad buuxda ee shayga aad rabto.
5. Sidee ku saabsan waqtiga muunadda? Waa maxay lacag-bixinta?
Waqti Sample: 1-5 maalmood kadib amarka & shaybaarka la xaqiijiyay.
T / T 30% dhigaalka, dheelitirka ka hor inta aan laga dhoofin warshadda.
Hore: Bacda qaboojiyaha
Xiga: Microwave kululeeyaha qaboojiyaha Gel Cap
Suugaanta Xayawaanka Cool
Qaboojinta Sariirta Eeyaha
Suunka Qaboojinta Eeyaha
Hilibka Qaboojinta Jel Mat
Mat qaboojiyaha Mat
Is-qaboojinta Xirfadda Xayawaanka